Imodyuli yokutshaja ye-Ev, Imodyuli ye-Ev Dc yokutshaja, Imodyuli ye-Ev Charger-UUGreenPower
Imodyuli yokutshaja ekhuselayo ephezulu ye-IP65 yamkela itekhnoloji yokuhambisa umbane kunye nobuchwephesha bokutshabalalisa ubushushu, kwaye yenzelwe ngokukodwa ukugoba amandla aphuma ngaphandle okukhawulezayo kwezithuthi zombane. Inqanaba lokhuselo lokusingqongileyo lifikelela kwi-IP65, enokuziqhelanisa nemimandla eyahlukeneyo enothuli, inkungu yetyuwa kunye nokuxinana.
I-UBC 75010 eya kumacala amabini i-V2G yokutshaja inqwaba esetyenziswa ngokubanzi ekurholiseni nakwimpendulo yamandla phakathi kwezithuthi zabakhweli zombane kunye negridi yamandla .Ixabiso lesicelo sayo lilele ekwaneliseni ukutshaja mihla le kwezithuthi zabakhweli, kunye nokudlala indima yendima yombane. ukutshaja ngocwangco kwigridi yamandla, ulawulo kwicala lemfuno yamandla, ixabiso elidityanisiweyo legridi encinci kunye namandla e-Intanethi.
I-UR100030-SW imodyuli yokutshaja ye-EV yenzelwe ngokukodwa itshaja enkulu ye-EV DC. Inoluhlu olubanzi lwevolthi yokuphuma kwamandla rhoqo. Ikwanayo namandla ombane aphezulu, ukusebenza okuphezulu, amandla oxinano aphezulu, ukuthembeka okuphezulu, ulawulo olukrelekrele kunye nembonakalo entle. Iindlela ezishushu ezinokutsha kunye nezikrelekrele zolawulo lwedijithali zisebenza kunye ukukhusela kwangaphambili ukusilela kunye nokuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.
I-umev04 yokutshaja imodyuli yokujonga imodyuli ixhotywe ngescreen sokuchukumisa umbala se-LCD kwaye inonxibelelwano lomntu olwenziwe ngumntu. Yenzelwe ngokukodwa umgangatho waseYurophu kunye nomgangatho waseJapan wokutshaja iimfumba zezithuthi zoMbane. Ixhasa iCCS + CHAdeMO + AC, CCS + GB / T + AC, CCS + CHAdeMO + GB / T, njl.
Siyakholelwa ekubeni indalo kuphela kwesixhobo esinamandla sokufumana isiphumo esihle sophawu.
Kwaye siya kusebenzisa indalo kuyo yonke imveliso yoyilo.
Iqela le-R & D lobungcali
Ukuzibophelela ekubeni ngumnikezeli ongcono wezinto eziphambili kwisitishi sokutshaja kakhulu.
Phantse iminyaka engama-20 yamava ophuhliso
Ukuqokelelwa kwetekhnoloji yamandla e-DC kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo kubeke isiseko esiluqilima sophuhliso lwangoku.
Uyilo olwenziweyo oluphambili
Siyazingisa kuyilo olutsha kwaye sizame ukuyila uthotho lwemodyuli yokutshaja kwizikhululo zokutshaja kakhulu.
Isiqinisekiso senkonzo esemgangathweni
Asiboneleli kuphela ngenkonzo yangaphambi kokuthengisa, kodwa kunye nomgangatho ophezulu wenkonzo emva kokuthengisa.
● IP65 yokukhusela ...
● Ukuhanjiswa kwezinto ezimbini ...
Ukusebenza okuphezulu okuphezulu: i ...
● Ukusebenza okuphezulu okuphezulu: t ...
Umba UMEV04 DC kwi ...
Gxila kumandla ombane amatsha, sombulula ingxaki kwindawo yebhotile.
I-Shenzhen UUGreenPower Electric Co, Ltd, esekwe ngo-2015, izinikele ekubeni ngumthengisi ogqwesileyo wezinto eziphambili kwizikhululo zokutshaja kakhulu. Inkampani ineqela lobuchule be-elektroniki ye-R & D, phantse iminyaka engama-20 yokuqokelelwa kwetekhnoloji yamandla e-DC, kuyilo loyilo, ukwenza uthotho lweemodyuli ezingama-40kW, 30KW, 20KW, 15KW kwizikhululo zokutshaja kakhulu.
I-Shenzhen UUGreenPower ibambelela kubathengi, kugxile kubuchwephesha, kugxila kubuchwephesha bamandla e-elektroniki, ukusombulula indawo yabathengi, ukukhula kunye nabathengi, kunye nokudibanisa ngokudibeneyo amandla aluhlaza kunye noqoqosho lwekhabhoni esezantsi kushishino lwezithuthi zombane.
I-UUGreenPower ikhupha iZisombululo ezi-4 zeSupercharging Solutions
Nge-Sep / 11/2020
I-UUGreenPower ikhupha iZisombululo ezi-4 zeSupercharging Solutions! Incam Core: ngo-Agasti 26, i-14 Shanghai International umboniso izibonelelo umboniso kushishino yabanjwa e Shanghai New International Expo Centre. Kulo mboniso, inani lamashishini asekhaya nakwamanye amazwe ...
Nge-11 kaJuni, idatha ekhutshwe yi-China Charging Union yabonisa ngokusesikweni ukuba nge-Meyi ka-2018, iiyunithi ezingamalungu kumfelandawonye ziye zaxela inani elipheleleyo lama-266,231 elityala, iziqwenga zedatha yolwazi. T ...
NDANEV: Uhlalutyo lwedatha yokufikelela kukwanda kwezithuthi zamandla kwilizwe liphela
Nge-30 kaJuni, i-2018, iwebhusayithi esemthethweni yeNational Big Data Alliance (NDANEV) yeZithuthi eziNtsha zaMandla ikhuphe amanani kunye nohlalutyo lolwazi kumthamo wokufikelela kwemithombo emitsha ngoMeyi. Ngokusekwe kwidatha yokwazisa, eli phepha lihlalutya ngokulandelelana ukufikelela kwinqanaba lokufikelela ...
Icandelo leVolkswagen Group liphuhlise kwaye lakhupha isikhululo sokutshaja esiphathwayo kwizithuthi zombane, izithuthuthu zombane kunye neebhayisikile zombane, ezibizwa ngokuba sisikhululo sokutshaja seVolkswagenpassat. Ukubhiyozela isikhumbuzo seminyaka engama-80, iVolkswagen izakufaka izitishi ezili-12 zokutshaja kwiselfowuni ...
Nge-9 kaJulayi, i-Nanjing Bureau of Price Bureau ikhuphe "Isaziso sokuLungisa iMigangatho yokuBiza iRhafu nokuTshintshwa kweZithuthi zoMbane eziSulungekileyo". Isaziso sichaze ngokucacileyo ukuba uhlengahlengiso olusulungekileyo lwebhasi yombane (12m) ukutshaja kunye nokubuyisela owona mgangatho uphakamileyo wokutshaja ...